Abaarta Gedo Oo Kasoo Dartay – Goobjoog News
Abaarta Gedo Oo Kasoo Dartay
Guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, Sahal Macalin Aadan ayaa sheegay in xaaladda bini’aadannimo ee ka jirta degmadaasi ay tahay mid aad u liidato, oo dadka abaaraha haystaan noloshooda aad u adagtahay.
Waxa uu sheegay guddoomiyaha in dowladda Federaalka Soomaaliya ay u kuur gasho xaaladda nololeed ee dadkaasi, maadaama abaarta ka jirta Gedo ay dadkaasi aad u saameysay.
Guddoomiyaha ayaa ugu baaqay madaxweyne Farmaajo in booqasho ku tago deegaannada gobolka Gedo si uu u arko xaaladda abaareed ee ka jirta gobolkaasi.
“Abaarta ka jirta Gedo aad bay u daran tahay, waxaana abaarta ay mareysaa meeshii ugu darneyd, waxaan ugu baaqeynaa in dadkaan gurmad lala soo gaaro, ma haystaan dadku biyo iyo baad toona, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Farmaajo waxaan ugu baaqeynaa inuu yimaado deegaannada gobolka Gedo oo indhahiisa ku arko xaaladda jirta” ayuu yiri guddoomiyaha degmada Ceelwaaq.
Abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada ayaa ka jirta deegaanno badan oo gobolka Gedo ah, waxayna dadku u baahan yihiin gurmad dhan walbo leh.
Dhageyso: Heshiis Horudhac Ah Oo Laga Gaaray Xiisad Ka Jirtay Degmada Hobyo, Mudug
Ucdaja clbijo generic cialis cialis generic
Burfow usonqw Viagra or cialis cialis 5mg price
Czgvdb pmndej cialis online cialis no prescription
Dfctbn hxmyks rx pharmacy Fndbd
cialis viagra levitra canada cialis super active real online...
cialis no prescriotion cialis no perscrption pictures of pen...
where i can purchase viagra buy viagra cialis mix online fre...
buying viagra in ireland buy generic viagra online brand via...
generic cialis canada cialis generic cialis 10mg pills [url=...